Tuug magaalada Paris ku xaday saacad qiimaheedu lagu sheegay $800 kun oo u xirneyd… – Hagaag.com
Posted on 11 Oktoobar 2019 by Admin in Lifestyle // 0 Comments
Tuug xaday saacad kuwa gacanta lagu xirto oo qiimaheedu ka badan yahay $ 800,000, waxay u xirneyd ganacsade reer Japan ah banaanka hotel kuwa raaxada ah oo Paris ku yaallo, booliska Faransiiska ayaa sidaasi yiri.
Afhayeen u hadlay booliska Paris ayaa u sheegay CNN in ninka Japanese-ka uu ka baxay hudheelka “Napoleon”, kaasi oo ah shan xiddig, oo ku yaal meel wax yar u jirta Champs Elysees iyo Arc de Triomphe, 9-kii fiidnimo, si uu u soo cabbo sigaar, halkaasi oo uu kula kulmay tuug isla markaana uu saacada gacantiisa ku xirneyd ka xaday.
Tuugga ayaa ku dhawaaday dhibanaha si uu u waydiiyo sigaar, laakiin markii uu Japaniiskii soo saaray baaked sigaar ah, tuugga ayaa dafay saacadii ​​wuuna cararay, sida laga soo xigtay website-ka BFMTV oo taabacsan shabakadda CNN.
Webside-ka wuxuu tilmaamay in saacaddu ku naqshadeyneyd astaanta ganacsi ee Switzerland “Richard Mill”. Saacadan qaaliga ah ee leh dheemanta waxaa lagu qiimeeyay 757,000 Euro ($ 830,000). Afhayeenka booliska ayaa sheegay in qiimaheeda oo aad u sarreeya awgeed, ay ciidamada la dagaalanka dambiyada ay heleen faylka kiiska.
Dhacdadan ayaan ahayn tii ugu horreysay oo nooceeda ah oo ka dhacda caasimada Faransiiska ee Paris, Paris ayaa waxaa ka dhacay falal tiro xatooyo ah oo saacadaha qaaliga oo la sheegay in sideedii bilood ee ugu horeysay sanadkan uu dhacay 71 kiis oo isku mid ah. Sida laga soo xigtay BFMTV.
Inta badan tuugada ayaa ka howlgasha jidadka qurxoon ee ka soo horjeeda Champs-Elysées, halkaas oo hoteello badan oo qaali ah iyo dukaamada dahabka ah ay ku yaalliin.
Waxaa laga yaabaa in saacadaha qaaliga lagu iibiyo suuqa madow iyadoo laga dhimayo 30% ama 50% qiimaheeda asliga ahaa, sida laga soo xigtay BFMTV.
Tuugada ayaa u isticmaala xatooyadooda qaabab kala duwan , iyadoo qofka la garaaco ama lagu weeraro mootooyin, ama qaarkood inay ka dalbadaan sigaar ama in ay la galaan sawir ama inuu u tilmaamo meel, iyo khiyaanooyin intaasi ka badan.